I-plugin ye-Authorship ye-WordPress | Martech Zone
NgoLwesithathu, Februwari 29, 2012 NgoLwesihlanu, Septhemba 27, 2013 Douglas Karr
Bengilokhu ngishaya yonke inkampani engiyaziyo ukusizakala nge amakhono wokubhala i-Google eyilethe emakethe. Ngibonile ukwanda okukhulu kokuchofoza kumakhasi wethu wemiphumela yenjini yokusesha kanjalo nabafundi bethu. Ukhathele ukuthi ngikhuluma ngakho? Yebo, kulula kakhulu manje ukunika amandla izici zokubhala ku-WordPress sibonga i-plugin emangalisayo, ebizwa AuthorSure.
I-plugin yabo inikela ngazo zonke izici ezidingekayo… ngaphezu kokunye okumbalwa okuhle - kufaka phakathi ukushicilela ama-bios wakho wombhali kokuthunyelwe kwebhulogi, ukufometha ikhasi lombhali elikhulu, nokushicilela amazwibela acebile. I-plugin isebenzela i- ababhali abaningi.
Sibhale ithoni yekhodi futhi bekufanele senze ngezifiso isihloko sethu se-WordPress ukwenza konke lokhu kwenzeke… Ngifisa sengathi ngabe besinayo le-plugin emuva lapho! Nazi ezinye izithombe-skrini ezisuka kusayithi labo ezibonisa izici ezahlukahlukene:
Uma ungakaqali ukusebenzisa noma yimaphi amathuluzi okubhala… kwenze MANJE! Futhi qiniseka ukucebisa abantu ku-AuthorSure ngokwenza lo msebenzi omangalisayo. Manje sidinga ukusebenza ekukhipheni enye ikhodi yethu ukuze simane sisebenzise le plugin!
Tags: i-plugin yokubhalai-plugin yokubhala ye-wordpressukubhalwai-plugin ye-wordpress yokubhala
Mar 1, 2012 ku-6: 17 PM
Siyabonga ngokukhuluma nge-plugin ye-AuthorSure - ukusho nje ukuthi uma kukhona ofuna ukukuzama okwamanje sisiza abantu ukuthi bahlele.
Kulula ukubambeka UMA ingqikithi yakho izama ukwenza umaki wobunikazi futhi ikwenzela izinto, noma enye inkinga esiyibonile lapho abantu bezame ukwenza umaki futhi nganoma yisiphi isizathu ukuthi ayisebenzi, bazama ukwengeza i-plugin. Kufanele uhlanze konke ukuzama kwakho kwangaphambilini ngaphambi kokufaka. Noma kunjalo - sizosiza uma noma ngubani edinga isandla.
Mar 4, 2012 ku-10: 53 PM
Siyabonga ngokwabelana ngalokhu. Ngabona ubuqambi be-Google busebenza futhi ngazibuza ukuthi ngizokuthola kanjani. Manje sengiyazi.